XOG: Sababta dalalka ay dumarku hoggaamiyaan ay jawaab fiican uga bixiyeen fayraska Corona? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaXOG: Sababta dalalka ay dumarku hoggaamiyaan ay jawaab fiican uga bixiyeen fayraska Corona?
XOG: Sababta dalalka ay dumarku hoggaamiyaan ay jawaab fiican uga bixiyeen fayraska Corona?
Ka soo billow New Zealand ila Jarmalka, Taiwan ama Norway, wadamada qaar ee dumarka ay hogaamiyaan dad yar ayaa cudurka Corona ugu dhimanayo dalalkaasi.
Siyaasiyinta dalalkaasina waxay warbahinta ku amaantay tallaaboyinka ay qaadeen si loo xakameeyo cudurkan adduunka ka abuuray xasarad caafimaad.
Warbixin dhawaan lagu daabacay wargeyska Forbes ayaa lagu tilmaamay ” inay tusaale u yihin hogaamiyaha wanagsan”.
”Dumarka ayaa tusinaya dunida sida loo xallin kara mashaqada dunida ku habsatay”, ayaa lagu yiri qoraalka ay Forbes daabacday.
Khuburada ayaa sheegaya in wadammada xakameyay Covid-19 dhamaantood ay hogaamiyaan dumar.
Haddaba, maxa hogaamiyayaasha dumarka ah u fududeeyay in ka guul garaan la dagaalanka cudrkan saf marka ah?
Raisul wasaaraha wadanka Iceland Katrín Jakobsdóttir ayaa dalkeeda waxa uu sameyay baaritaan ballaaran oo cudurka covid19 ah iyadoo tirada shacabka dalkaasi ay aad u yartahay oo ay gaareyso 360,000 oo qof oo kali ah.
Talaaboyinka ay ka mid tahay inaysan dad badan hal meel ku kulmin dalka Iceland waxaa laga hirgaliyay bishii Janaayo iyadoo xita hal kiis laga diiwan gelinin dalkaasi.
April 20-keeda waxaa dalkaasi cudurka ugu geeriyooday 9 qof.
Taiwan-na, madaxweyne Tsai ing-wen ayaa markii cudurka Shiinaha lagu arkay durbaba sameysay goob lagu karantiilo bukaannada goob lagu xakameeyo cudurka, waxayna qaaday tallaaboyin lagu xakameynaayo Feyraska.
Taiwan sidoo kale waxa laga sameeyay durbadiiba shirkado soo saara qalabka la’iskaga difaaca xannuunka sida marada wajiga lagu xirto. Iyadoo dalkaasi ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 24 milyan ayaa hadana waxa xanuunka ugu geeriyooday 6 qof oo keli ah.
Dhanka kale, Rai’sul wasaraha New Zealand, Jacinda Ardern ayaa qaaday tallaaboyinka ugu adkaa ee dunida kuwaas oo lagula dagaalamayo xanuunka Covid-19.
Dalkaasi waxaa laga diwaangeliyay 20-kii April in ay ku dhimatay 12 qof.
Balse, dalalkan inay dumar maamulaan oo keli ah kama sinno ee waxay sido kale wadaagaan in ay haystaan hanaan caafimaad oo horumarsan iyo dhaqaale sare.
Marka, ma hogaamiyayasha laftirkooda ayaa isbadelka keenay mise sababa kale ayaa u wheliyo?
Waxay ku xirantahay kala duwanaanshaha
Sida ay hogaamiyayasha dumarka ee la doortay ay arrintan u wajaheen ayaa qeyb ka ah horumarka ay ka sameeyen xakameynta xanuunka , iyo in la sameyay hogaan isku dheeli tiran oo rag iyo dumarba leh. Sidaasi waxaa sheegtay Dr Geeta Rao oo ah madaxa barnaamijka 3D ee gabdhaha iyo dumarka lagu caawiyo.
”Go’an fiican ayaa la qaadan karaa mar haddii aragtiyada ay qeyb ka yihiin ragga iyo dumarka,” ayey BBC-da u sheegtay.
Taasi waxay ka hor imaaneysa fikradaasi kuwa ka soo horjeeda oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro.
Rosie Campbell oo madax ka ah jaamacada Kings College ee London ayaa iyadana aaminsan inay adagtahay in la isku raaco in haweenku ama raggu kala hoggana fiican yihiin.”
” Balse la macaamilka dadka dumarka ayaa kaga roon raga, hogaamiyayaasha dumarka ayaa dad kasbashada iyo la dahqanka ku wanaagsan,” ayey ku dartay.
Hogaamiyayaasha siyaasadda ee Mareykanka, Brazil, Israel iyo Hungary iyo wadamo kale ayaa isku dayay inay wadamo shisheeye dusha uga tuuraan eeda ah in an aysan sidii la rabay uga qabanin cudurka.
Jawaabta laga bixiyay xasaradda Covid-19 ayaa dalalka kala saartay. Wadan kasto iyo waxay noqotay dhaqaalihisa, taasi oo jinsiga tahay uusan saameyn ku yeelaneynin.
Madaxweynaha Kuuriyada Konfureed Moon jea-in ayaa isna xasarada si wanagsan u wajahay. Sidoo kale Raisul wasaraha Greega-ka Kyriakos Mitsotaskis ayaa sidoo kale lagu amaanay sida uu xaalada u maareyay, tan iyo intii uu cudurka ka dilaacay dalkaasi waxaa Corona u dhintay 114 qof iyadoo ay ku noolyihin 11 Milyan oo qof.
Dhanka kale waxa jiri wadamo ay dumar maamulaan oo la tacaalaayo xakameynta cudurka, Sid Bangladesh, Rai’sul wasare Sheikh Hasina oo dalkaasi hogaamisa waxay ku guuleysatay inay ka xakameyso cudurka. Dad badan ayaa haseyeeshee ku dhaliilay qalabka baaritanka oo dalkaasi ku yar iyo shaqaalaha caafimaadka waxay ka cabanayaan in qalabka cudurka la’iskaga difaaco u ku yaryahay oo ay qatar daran ku jiraan.
Si loo xakameeyo Covid-19, hogaamiyayasha waxay ku qasbanaadeen in ay qaataan go’amo adag, Sida in ay xiraan ilaha dhaqaalaha.
Balse go’aamadaas waxay yeelan doonaan sameeyn siyaasadeed oo xilli dhaw ah,sida ay sheegtay prof Cambpell.
Balse hogaamiyayaasha dumarka qaar ee si furan uga hadlay caqabadaha wadankooda soo wajihi doona ayaa taageero badan ka helay shacabka.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Markel waxay durbadiba garowsatay in Covid-19 uu leyahay ”khatar aad u daran.”
Waxay wadankeeda ka hirgalisay xaruuntii ugu weyneyd Yurub ee baaritanka lagu sameeyo. Inka badan 4,600 oo qof ayaa dalkaasi cudurka ugu dhimatay, tirada dalkaasina waxa lagu qiyaasay 83 milyan.
Norway iyo Denmark oo rai’sul wasare ay ka yihin dumar ayaa iyagana u suurta gashay in horumar wanagsan ay arrintan ka sameyaan.
Hogaamiyahasha Norway iyo Denmark ayaa labaduba shir jara’id oo ay qabteen waxa un loo ogolaaday inay ka soo qeyb galaan caruur oo dadka waaweyn waa loo diiday.
”Waa in aad qadata go’an muhimad u sameynaayo dadka oo dhan”
Waayo dumarka, waxay soo mareen marxalado kala duwan oo waxay soo qabteen masuuliyada kala duwan. Marka waxa laga yaabaa in go’aan walbo oo ay qaadanayaan ay taasi saameyn ku yeelato.
Dr Gubta waxay ka digeysaa sameeynta dhaqaale iyo tan bulshada dhaxdeeda ah ee u ku keenay Covid-19 ragga iyo dumarkaba kuwaasi oo ay ka mid yihin “xadgudubyada qoyska ka dhaca oo sare u kacay, khatarta loogu jiro saboolnimada iyo isku dheeli tir la’aanta mushaarka dumarka iyo ragga waxay dhammaantood keeni karaan in aanu dib u laabano”.
“Walaashey oo bil ka hor la ii sheegay inay Corona u geeriyootay ayaa i soo wacday”
Somalia: Tirada Dadka u Dhintay iyo inta laga Helay Cudurka Covid-19 oo Cirka Isku Shareertay & Warbixintii u Dambaysay